Hôtel de ville : L’œuvre de Joël Andrianomearisoa à l’honneur - ewa.mg
News - Hôtel de ville : L’œuvre de Joël Andrianomearisoa à l’honneur
« Ici nous portons tous les rêves du monde », voici ce que révèle la sculpture installée sur l’esplanade de l’Hôtel de ville Analakely et qui sera inaugurée le samedi 9 octobre 2021. L’œuvre de l’artiste de renommée internationale Joël Andrianomearisoa est un prêt de la Collection Yavarhoussen. Une sculpture qui ramène les gens de la capitale à songer à de nouvelles aspirations. La mélancolie de Joël Andrianomearisoa est souvent porteuse d’énergie et d’espoir. Et c’est bien cela qui a convaincu le maire d’Antananarivo à installer cette œuvre au cœur de la ville, en invitant le Fonds Yavarhoussen. « Une invitation à la confiance que viendra puiser à son contact le passant quotidien. Une invitation à prendre conscience que chacun de nous, que nous soyons artiste, entrepreneur, commerçant, artisan, professeur ou médecin, que nous puisions nos origines dans cette île aux mille paysages, d’Afrique, d’Europe, d’Inde ou d’Asie. Nous portons tous un rêve que cette œuvre nous invite à faire grandir ».
L’article Hôtel de ville : L’œuvre de Joël Andrianomearisoa à l’honneur a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Basikety-Afrobasket: hatao “huis clos” ny fifanintsanana any Kigali
Araka ny efa fantatra, hotontosaina ny 25 hatramin’ny 29 novambra izao any Kigali Rwanda ny fifanintsanana eo amin’ny lalao Afrobasket 2021. Tapaka fa hatao “huis clos” ity fifaninanana ity, noho ny mbola fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus any an-toerana. Tsy hisy, araka izany, ny mpijery fa ny mpilalao sy ny mpitsara, miaraka amin’ireo “Staff” isan-karazany, isaky ny ekipa ihany ny mahazo miditra ao amin’ny kianja. Nohamafisin’ny filohan’ny federasiona malagasy ny basikety, Ramaroson Jean Michel, fa voarakitra anatin’ny taratasy nalefan’ny FIBA mihitsy izany.Mahakasika ity lalao ity hatrany, raha ny tokony ho izy, ny 20 novambra no hanainga ny delegasiona malagasy, hoy ny filohan’ny FMBB, saingy hiankina betsaka amin’ny fisokafan’ny sidina eto amintsika izany. Aorian’io, ny fifaninanana Bal “Basket AfroLeague” no hatao any Rwanda, ka ny 5 hatramin’ny 15 desambra no hizorany. Ny GNBC moa no solontenantsika amin’izany, araka ny efa notaterina teto, ny NBA avokoa no miantoka ny rehetra, mbola mandray tambin-kasasarana, toy ireny mpilalao matihanina any ivelany koa ny mpilalao. Mi.RazL’article Basikety-Afrobasket: hatao “huis clos” ny fifanintsanana any Kigali a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 3 juillet 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 3 juillet 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 3 juillet 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
NTIC- Fifandraisan-davitra : manodidina ny 70 % izao ny mampiasa finday
Sehatra iray haingam-pandroso indrindra eto Madagasi­kara ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (NTIC). Be­tsa­ka ny ivontoerana mampianatra azy sy ny orinasa tsy afa-miala aminy amin’izao vanim-potoana izao. Manana ny fa­hai­za-manao amin’izany ny ta­nora malagasy amin’ny fampiasana ireo fitaovana samihafa.Noraisin’ny fitondram-panjakana nifandimby ho politikan’ny governementa ny fifehezana ny fifandraisan-davitra amin’ny endriny ankehitriny, ka nametrahana tambajotra samihafa any amin’ireo distrika mampita ny sary sy feo amin’ny fahitalavitra TVM, manampy izany ny FM sy BLU tonga hatrany ambanivohitra. Manampy ny orinasa tsy miankina ireny fotodrafitrasa ireny amin’ny fanaovana ny asan’izy ireo. Nitombo, ohatra, ny isan’ny mampiasa finday nanomboka ny taona 2000, ankehitriny, manodidina 70 %, raha mbola 38,28 % tany amin’ny 10 taona lasa.Manampy amina sehatrasa maro ny NTIC, manamora ny asan’ireo mpandraharaha eo amin’ny mpivarotra sy ny mpividy mpanangom-bokatra. Nihena ny loza mihatra any ambanivohitra hatramin’ny nisian’ny vola kirakiraina amin’ny «Paositra Money, Airtel Money, MVola, Orange Mo­ney». Antoka iray miaro amin’ny herisetra ny fivoaran’ny fifandraisan-davitra any amin’ny tontolo ambanivohitra, ma­nampy hisian’ny fitondrana tsara tantana sy ny vehivavy any ambanivohitra.R.MathieuL’article NTIC- Fifandraisan-davitra : manodidina ny 70 % izao ny mampiasa finday a été récupéré chez Newsmada.
Basikety- Mada Vétéran: ampy fanomanana tsara ny AT2B
Hanomboka ny faran’ny herinandro izao, any Toliara ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, sokajy Vétéran, taranja basikety. Isan’ny handray anjara amin’ireo ekipa miisa 15 amin’ny sokajy lehilahy ny ekipan’ny AT2B (Andraisoro Tia Basikety), izay efa nanoman-tena mafy hiatrehana ity fifaninanana ity, raha ny nambaran’ny filohan’ny klioba, Rabenjamina Fanja. Manana mpilalao sangany afaka hifaninana tsara izy ireo, na dia tsy feno tanteraka aza izany, hoy hatrany ny fanazavany, isan’izany ry Mika, nilalao tao amin’ny Mb2All sy ry Angelot nilalao tao amin’ny Sebam taloha. Tsy ambakan’izany koa ry Lala, Dafy, Rodin sy Tonton Sola. Tsy hanaiky lembenana manoloana ny mpifanandrina aminy, araka izany, ity ekipa ity fa hampiseho ny traikefany tanteraka. Tsiahivina, ekipa 47 ny handray anjara amin’ity fifaninanam-pirenena ity ka 32 ny vehivavy ary 15 ny lehilahy.Etsy an-kilany, hotontosaina manomboka ny faran’ny herinandro izao ihany koa ny fiadiana ny tompondaka nasionaly ho an’ny sokajy latsaky ny 16 taona lahy sy vavy. Fifaninanana hatao any Moramanga, haharitra herinandro. Saika efa vonona avokoa ireo ekipa handray anjara amin’izany ary hafana vay ny fifandonana amin’ity fifaninanana ity. Mi.RazL’article Basikety- Mada Vétéran: ampy fanomanana tsara ny AT2B a été récupéré chez Newsmada.
Tontolon’ny lamaody: haneho ny “Soamiranty” i Tikalo Tsisatry
Tikalo Tsisatry, tovovavy mpisehatra eo aminy tontolon’ny sary sy lamaody ary mpikanto ny teny sy ny soratra na “Mannequin-modele photo, styliste-modéliste”. Mikarakara ny “ Soamiranty” izy, ankehitriny.Eo am-panomanana ny vokatra voalohany i Tikalo Tsisatry. Fiaraha-miasa amina mpahailamaody « styliste » iray azo lazaina fa efa manana ny maha izy azy, i Toky Ranaivo. Hamoaka ny marika iray mitondra ny anarana hoe “Soamiranty” izy ireo. “Raha hadika tsotra ny hevitry ny “Soamiranty” dia hoe mirantiranty ny hatsarana”, araka ny fanazavan’i Tikalo Tsisatry. Tsy resaka lamaody ihany nefa no hita ao anatin’zay fa ao ihany koa ny fikolokoloana ny volo sy ny tarehy. Etsy amin’ny botika Soamiranty Ankoron­drano no anatanterahana izany. Fantatra fa mety hisokatra ny volana aogositra ho avy izao io toerana io. Efa eo am-perim-panomanana tanteraka ny pitsopitsony rehetra amin’izany i Tikalo Tsi­satry sy ny mpiara-miasa, ankehitriny. “Ny olona tia lamaody sy tia mikarakara endrika amam-bika no sarihina voalohany …”, araka ny nambarany.Misehatra amin’ny tontolo hafaMaro ny fiaraha-miasa tamin’ny olona teo amin’ny tontolon’ny sary sy lamaody ary ny fi­kan­toana ny teny sy ny soratra. Anisan’izany ny “Modus mode”, hetsika iray tao amin’ny Alliance française niarahana tamin’i Gaona Christiansen, mpahailamaody (styliste) iray efa kalaza. Teo koa ny fivahiniana nataony tanaty magazine “Essentiel” sy “Amazone”. Ankoatra ireo, efa nilalao sarimihetsika tao amin’ny Vision prod “Ditsoka Tomany 2”. Isany nahafantaran’ny olona azy ihany koa ny nanaovany “cover” ny hiran’i Arione Joy, “Vonin­kazo voarara”, izay navadika ho antsa tononkalo. Ny fidirana tao anatin’ny sary tamin’ny alalan’ny « Modele portrait à la minute », ny filalaovana teatra tao amin’ny fikambanana Bee Z’art.NarilalaL’article Tontolon’ny lamaody: haneho ny “Soamiranty” i Tikalo Tsisatry a été récupéré chez Newsmada.
Fitokonan’ny kaominina Antsirabe :: Niverim-potsiny ny Emmo-Reg saika hamoaka fiara mpitaona fako
Niveri-maina, tsy naharesy lahatra an’ireo mpiasa mitokona tao amin’ny kaominina ambonivohitra Antsirabe ireo mpitandro filaminana, omaly. Nanao be fihavy ny avy amin’ny Emmo-reg sy ny vadintady niaraka tamin’ny taratasy saika hamoa­hana ireo fiara be mpitaona fako, tao amin’ny biraon’ny sampan’ny fanadiovana na voaria, tao Ivory. Tsy nanaiky hatramin’ny farany ireo mpiasa. Tsy nihetsika ireo fiara tokony ho nampiasaina tamin’ny fanadiovana ny tanàna. Vao maraina dia efa nifampitaona nihazo an’io toerana ao Ivory io ireo mpia­san’ny kaominina izay mandà hatramin’ny farany ny five­renana miasa raha tsy voaefa ny karaman’izy ireo nandritra folo volana. Io antony io hatrany no niteraka ny fitokonana efa nanomboka ny 15 febroary lasa teo. Nikasa hanadio tanàna kosa ny avy ao amin’ny fiadidiana ny tanàna satria dia tena rakotra ny renivohitr’i Vakinankaratra, taorian’ny fankalazana ny fetin’ny Paska, izay nisiana hetsika samihafa. Tsy nisy mihitsy ny fifampiresahana sy fahitana ny marimaritra iraisana ka dia izao tonga teny an-toerana nikasa hamoaka ireo fitaovana fanadiovana sy ireo fiara be izao ireo mpitandro fila­minana. Horakoraka sy taba­taba no nitsenan’ny mpiasa azy ireo rehefa tonga teo am-bavahady. Nisy ny fifano­sitosehana tao anatin’izany saingy tsy nisy kosa ny naratra. Raha ny nambaran’ireo mpiasa dia efa nisy ny fivoriana nifanaovan’izy ireo niaraka tamin’ny Vondrona iarahana amin’ny fandaminana na ny OMC, tarihin’ny Préfet-n’Antsirabe. Nifanekena tamin’izany fa tokony hisy ny fifanarahana hatao sy ny fijerena ny fana­rahan-dalàna amin’ny fitan­tanana ny kaominina, saingy dia izao tsy mety tonga amin’ny fivahan’ny olana toy ny zava-niseho omaly izao. Angola Ny Avo L’article Fitokonan’ny kaominina Antsirabe :: Niverim-potsiny ny Emmo-Reg saika hamoaka fiara mpitaona fako est apparu en premier sur AoRaha.
Nametraka fitoriana eny amin’ny Zandarimaria noho ny fampitahoran’ny andian’olona azy, taorian’ny fanehoan-kevitra nataony tamina haino aman-jery tsy miankina iray, ny solombavambahoaka, Said Zakaniaina Mahafaly. Nambarany fa manana fahalalahana haneho hevitra ny olom-boafidy ka tokony tsy hisy ny endrika fampitahorana na fandrahonana tahaka izao. L’article Fitoriana depiote est apparu en premier sur AoRaha.